ခရိုင်ပေါင်းစုံ အသက်(၂၅)နှစ်အောက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး) ဖူဆယ်ပြိုင်ပွဲ ဆုချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနား စစ်ကိုင်းမြို့၌ ကျင်းပ
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်ဖလား ခရိုင်ပေါင်းစုံ အသက် (၂၅)နှစ် အောက် ဖူဆယ်ပြိုင်ပွဲ ဆုချီးမြှင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ယမန်နေ့ ညနေ ၄ နာရီက စစ်ကိုင်းမြို့ နှစ်(၇၀၀)ပြည့် ဖူဆယ်အားကစားရုံ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာမြင့်နိုင်၊ တိုင်းဒေသကြီး ဥပဒေချုပ်နှင့်ဇနီး၊ တိုင်း/ခရိုင်/မြို့နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများ၊ အားကစားသမားများနှင့် အသင်းခေါင်းဆောင် နည်းပြများ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဖေမြင့် မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတိုက်များမှ ဝန်ထမ်းများနှင့်တွေ့ဆုံ
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဖေမြင့်သည် ယနေ့တွင် နေပြည်တော် တပ်ကုန်းမြို့ရှိ မြန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် နေပြည်တော် ဇေယျာသီရိမြို့နယ်ရှိ ကြေးမုံ၊ မြန်မာ့အလင်းနှင့် နေပြည်တော် သတင်းစာတိုက်တို့မှ ဝန်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံသည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အထောက်အကူပြု ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ
Vol.VI, No. 318, Saturday, 29 February 2020
Vol.VI, No. 317, Friday, 28 February 2020
Vol.VI, No. 316, Thursday, 27 February 2020
Myanmar-India Joint Statement issued on the occasion of the State Visit of His Excellency U Win Myint, President of the Republic of the Union of Myanmar to the Republic of India (27 February 2020)
-နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ Colocation Data Center Virtualization အဆင့်မြှင့်တင်ရန် VMware Licenses ဝယ်ယူခြင်း (5 (T) / eGov-NPTDC / 2019-2020)အတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီအား အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း